Kranberị | Nutri Nri
Obere nri a dị n'ime ime ọmarịcha njirimara ndị bara ezigbo uru maka ahụ, obere obere nri ahụ nwere ike ime ka ahụike dịkwuo mma.
Ọ bụrụ na ịmabeghị uru kranberị, nọgidenụ na-agụ ahịrị ndị a n'ihi na anyị ga-agwa gị otu ha nwere ike isi lekọta gị ma mee ka ahụike gị ka mma.
Ha na-enye uru dị mkpa na-edozi ahụ ndị na-edozi ahụ eleghara anya. Mkpụrụ osisi ndị a na-acha uhie uhie na-enye uto uto kamakwa ọ na-atọ ụtọ, ọ bụ ezie na bluuberi anyị maara nke ọma bụ ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oji.
Lingonberries na-metụtara nsogbu gbasara eriri afo na oria mmamịrịMana, ha nwere ike inyere anyị aka n’akụkụ ndị ọzọ gbasara ahụike anyị.
1 Kranberị uru
1.1 Ha na-egbochi ọrịa mamịrị
1.2 Ebelata ihe ize ndụ nke kansa
1.3 Ọ na-eme ka ọ dị ọhụrụ
1.4 Nkpuru ogwu ndi mmadu
1.5 Mma anya
1.6 Ihe na-egbochi abụba
1.8 Na-ebelata ọrịa shuga
1.9 Na-abawanye ezigbo kọleji
1.10 Ọrụ gị na ọgụgụ isi ga-abawanye
Lingonberries nwere mgbagwoju anya na mkpụrụ osisi na-ekwenye na ha ga-atọ otu ahụ, n'agbanyeghị, ndị a dị ọtụtụ utoo na acidic. Ọdịdị ya yiri nke ahụ, na-echekwa ọdịiche dị na agba. Achịcha na-achakarị acha na-atọ ụtọ ma na-acha anụnụ anụnụ, na mgbakwunye, enwere ike iri ha ozugbo, n'aka nke ọzọ, ndị na-acha uhie uhie maka ekpomeekpo ha, a na-ewere ha dị njikere.
Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị na ụlọ ahịa dị ka ngwaahịa ọhụrụ, n'ihi na ọ bụghị ngwaahịa na-eri oke. Otú ọ dị, na ụlọ ahịa ngwaahịa pụrụ iche
Ọzọ anyị na-agwa gị kedu ka kranberi nwere ike isi nyere gị aka?
Ha na-egbochi ọrịa mamịrị
Ha zuru oke ma a bịa gbochie ma ọ bụ belata ọrịa urinary tract, na nke a bụ n'ihi nnukwu ego nke antioxidants. Anyi aghaghi ichefu na ahihia ndi a bara ụba na tannins nke n’enye ha ogwu na enyere anyi aka igbochi udiri oria a.
Ọrịa kansa bụ otu n'ime ọrịa ndị mmadụ na-atụkarị ụjọ, ọ nwere ike ibuso akụkụ ahụ ọ bụla ọgụ ma dabere na ogo ogo ya bụ ọrịa na-egbu egbu.
Enwere ike iji cranberry, dị ka ọtụtụ nri ndị ọzọ sitere n'okike, dịka ngwa ọgụ mgbochi gbochie cancer. Ọ na - enyere aka ị luso nsogbu nke ịba ụba nke mkpụrụ ndụ kansa ọgụ mgbe ndị a dị ole na ole, na mgbakwunye, ọ naghị emebi mkpụrụ ndụ ndị ọzọ.
Ọ na-eme ka ọ dị ọhụrụ
Ogige na lingonberries nwere proanthocyanidins, ụfọdụ ihe na-enyere ihe ịtụnanya dị iche iche aka ma mezie ahụike n’ozuzu ya. Ha na-egbu oge oge nke ịka nká site na iwepu ihe ndị na-akpata free na ihe ha na-eme na akpụkpọ ahụ. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ anụ ahụ gị nke ọma, akwụsịkwala ịmị mkpụrụ kranberị.
Nkpuru ogwu ndi mmadu
Kranberị nwere ọtụtụ antioxidants, yana mgbochi inflammatory. Ya mere, ọ bụ kwuru na ọ bụ nnọọ uru n'ihi na belata ụfọdụ ọrịa dị ka afọ zaa azịza, gas, isi ike, mgbu mọzụlụ, mgbu ịhụ nsọ, wdg.
Ọhụhụ ụzọ nke oge nwekwara ike ịnwe ụfọdụ mmebi na mmebi nke oxyidative, anụ ahụ nke retina nke eyeball nwere ike imebi ngwa ngwa. Maka nke a, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị rie kranberị ka anthocyanins ga - enyere gị aka igbochi mmebi anya a.
Ihe na-egbochi abụba
Ọ bụrụ na ị na-achọ idalata, ịnwere ike ịbawanye oriri nke cranberries na nri gị. Ha nwere eriri ma ghara inye nnukwu kalori. Mkpụrụ osisi dị mma na ị nwere ike iri iji mezie ọrụ nsia ma nyere gị aka inwe afọ ojuju site na nnukwu onyinye nke eriri.
Ha na-eme dị ka nchịkwa, maka ọdịnaya ya dị elu nke antioxidants. Na mgbakwunye, gallic acid na-arụ ọrụ site na ịbawanye ikike nke sistemu neuronal.
Na-egbochi ọrịa ndị dị ka Alzheimer, nke Parkinson nke na-emetụta ihe okike na usoro mmepe nke arụ ọrụ.
Na-ebelata ọrịa shuga
Oriri kranberị pụrụ inyere anyị aka melite uche insulin na ụfọdụ ndị buru oke ibu ndị na-eguzogide ọgwụ hormone a. Ọ na-alụ ọgụ megide ọrịa shuga ma na-enyere ahụ aka ịgbakwunye carbohydrates n'ụzọ ziri ezi, si otú a na-egbochi shuga shuga na-arị elu oke.
Ọzọkwa, na-enyere aka igbochi spikes ọbara, meziwanye nzaghachi insulin na ahụ. N'ụzọ dị otú a, a na-ebufe ihe ndị na-edozi ahụ n'ụzọ ka mma ma na-ekesa ọbara n'enweghị nsogbu. Na-egbochi nchịkọta cholesterol dị n'ọbara na akwara.
Na-abawanye ezigbo kọleji
Dị ka ị maara, ha dị ụdị cholesterol abụọ, ezigbo HDL, ma ọ bụ LDL ọjọọ. N'okwu a, cranberries na-enyere aka ịkwụsị cholesterol ọjọọ na ịbawanye ọkwa cholesterol dị mma.
Ọrụ gị na ọgụgụ isi ga-abawanye
Si buscas mụbaa ikike nghọta gị gbalịsie ike iri ọtụtụ kranberị, na mgbakwunye, ha ga - enyere gị aka ime ka ncheta gị na ikike gị ka mma. Iwere mkpụrụ osisi na-enyekwa ohere ịkwalite usoro mmụta na ebe nchekwa na izugbe.
Cranberries bụ nri ị nwere ike ịchọta ma na ngwaahịa ndị sitere n'okike, na ihe ọ orụ capụ ma ọ bụ capsules.N'agbanyeghi otu ị masịrị ya, gbaa mbọ hụ na mkpụrụ osisi na-eto eto na nke kacha mma n'ihi na otu a ahụ gị ga-enwe nri dị elu yana uru maka ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nri » Red kranberị